I-Indawo yokuhlala nezidlo zakusasa e-Alentejo
São Domingos, Alentejo, i-Portugal
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Marlene Amalie
Izindawo zokulala zokhuni zasemakhaya zothando ezitholakala endaweni engamahektha ayi-7, ubumfihlo obuningi. Isisekelo esikahle seholide elihlukahlukene. Imvelo engathintwa, amabhishi amahle namadolobhana amahle. Thola i-Alentejo!
I-Lodge ivulekile inombhede omkhulu, indawo yokugezela yangasese kanye nekhishi eligcwele. On the ithala ithala embozwe okunethezeka ifenisha lokhuni for esiphezulu ukuzijabulisa holiday.
Ipharadesi lamaholide i-O Nosso Mundo itholakala eduze kwechibi elithi "Barragem de Fonte Cerne" elangeni eliseNingizimu-ntshonalanga ye-Alentejo e-Portugal enhle, ngaphandle nje kwedolobhana elibukekayo laseForos do Locário kanye nemizuzu engama-40 kuphela ukusuka edolobheni elihle elingasogwini lolwandle i-Vila Nova de Milfontes. Ungakhetha emakamelweni kanokusho akwa-O Nosso Mundo noma ukhetha ikhaya leholide elisesimweni sendawo yokuhlala yokhuni yasemakhaya endaweni enkulu yase-O Nosso Mundo. Uzungezwe imvelo engangcolisiwe, ungakwazi ukujabulela ukuthula, indawo kanye nemibono emihle. Impela abathandi bemvelo beqiniso bangajabulela ukuhlala kwabo lapha. Kubabukeli bezinyoni, le ndawo iyipharadesi langempela lamaholide elinezinhlobo zezinyoni ezingaphezu kuka-80. Ngenxa yendawo yayo ekahle, i-Bed & Breakfast O Nosso Mundo iyisisekelo esihle samaholide ahlukahlukene e-Alentejo, e-Portugal. Imvelo, amabhishi amahle, amadolobhana namadolobhana angempela azokwenza uthande futhi ungalokothi ufune ukuhamba!
Ibungazwe ngu-Marlene Amalie
Emigreren was al jaren onze individuele wens. Toen we elkaar een aantal jaren geleden ontmoetten en duidelijk werd dat we samen oud wilden worden werd het tijd om plannen te gaan s…
Inombolo yepholisi: 6845